खब’रदार सरकार : जनताको आउँने दशैं ख’ल्लो नबनोस – Khabarhouse
खब’रदार सरकार : जनताको आउँने दशैं ख’ल्लो नबनोस
Khabar house | १८ श्रावण २०७८, सोमबार १६:५४ | Comments
काठमाडौं । ३ करोड ६ लाख बढी जनसंख्या भएको यो मुलुक । त्यसमाथि १८ बर्ष माथिका २ करोड ३० लाख बढी छन् । १८ बर्ष जोडिएको सन्दर्भ हो को’रो ना विरु’द्धको खोपका लागि । यही खोपको कुरा गर्ने हो भने हालसम्म ५० लाख हाराहारीमा नेपाली नागरिकले खोप पाएका छन् । त्यसमा पनि पहिलो डोज पाउने धेरै छन तर दोसो डोज पूरा गर्ने कम । सरकारले असोज सम्म थप १ करोड ५ लाख डोज खोप ल्याउने तयारी थालेको छ । त्यस्तै आगामी चैतसम्म तीन करोड डोज खोप ल्याउने दावी पनि सरकारको छ । तर यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न अघि सरकारले देश भित्र गर्नु पर्ने तयारी पनि धेरै छ ।
हालसम्म नेपालले ९७ लाख ८२ हजार ५ सय ५० डोज खोप प्राप्त गरिसकेको छ । तर लगाउने छन ५० लाख हाराहारी मात्र । हुनत दिने क्रम पनि धमाधम नै छ तर लाइन बस्नु मात्र पर्छ सकियो खोप त भनिदिदा धेरेको मन अमिलो हुने गरेको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको लागि पनि खोप चुनौतीको विषय नै बन्यो । अहिले वर्तमान शेर बहादुर देउवा सरकारका लागि पनि खोप चुनौती नै बनेको छ । को’रो नाबाट हुने क्षति रोक्न र वैदेशिक रोजगारीमा गएर टन्न रेमिट्यान्स पठाउन पनि खोप नै अनिवार्य भएको छ अब । केही दाता मुलुकले खोप दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
तर गएर कमाउनु पर्ने मुलुकले खोपलाई नै अनिवार्य सर्त बनाएका छन् । जस्को कारण ठूलो संख्यामा नेपालीको वैदेशिक रोजगारीको यात्रा अहिलेलाई धेरै ठाउँ ठप्प नै छ। सबैभन्दा ठूलो कुरो व्यवस्थापन हो। व्यवस्थापनमा पाइला पाइलामा चुक्दै आएको सरकारी निकायहरु खोपलाई पनि सुरु देखि नै व्यवस्थित गर्न पटक्कै सकेन । जस्ले गर्दा सर्वत्र खोपको दु’रुपयोग बढ्यो । जस्को असर हो को’भिशील्डको दोस्रो डोज नपाउनेको ठूलो संख्या। २३ दिन भित्र दोस्रो डोज दिने सहमति भएको पहिलो डोज लगाउँदा । तर ७ महिना बढी वितिसक्यो, १३ लाख ६८ हजार १ सय ७६ जना दोस्रो डोज लगाउन नपाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ आशाको नजर ओछयाइरहेका छन् ।
यही हो गल्ती, गल्तीमात्र होइन महा गल्ती हो । के अब समय घर्किएर दोस्रो डोज लगाउँदा त्यस्ले शरीरमा को’रो ना विरु’द्ध लड्ने काम गर्छ या गर्दैन कसैले केही बोलेका छैनन् । को’भि शील्डको कति संख्या भण्डारण गरेको ठाउँबाट नै हरायो या कतिलाई तथ्यांकमा गोप्य रुपमा चढाएर गोप्य नै रुपमा दिइयो । त्यस्को खुलासा होला कुनै दिन । तर को’भिशील्डमा खोपमा भएको र गरिएको गल्ती ओली सरकारको कार्यकालको विर्सनलायक पक्ष नै बन्यो । त्यसमाथि को’भिशील्ड खरिद गर्ने समयमा कमिशनको कोको होलो निकालेर भएको अलमल र त्यस्ले खोप खरिद गर्ने अवसर गुमेको घटना पनि नेपाली जनताले हिसाब किताबमा राखेका छन नै ।
दुरुपयोगकै चर्चा गर्दा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली एक व्यक्तिको घरमा कोरोना खोप लगाउदै गरेको भेटिएपछि स्थानीयले तत्काल विरोधमा उत्रिए । रातको समयमा मापदण्ड विपरित कोरोनाको खोप लगाएर मेयर पराजुलीले देखाएको पाराले खोपको दुरुपयोग अन्य ठाउँमा पनि नभएको होला भन्न सकिन्न । अहिले खुला सीमानाका कारण भारतबाट आएका वैध अवैध खोपले पनि गाउँघरका चियापसलमा समेत स्थान पाउन थालिसकेका छन् । खोप हान्ने हतारोमा यो अर्को महाभूल हुने तर्फ आम नेपाली को सचेत बन्न जरुरी छ ।
तर अब आउने र दिने खोपमा खेलवाड नहोस् । सबैलाई चाहिएको छ खोप, खोप पाउन सबै लाला’यित छन् । तर पुग्दो कहाँ छ र ? वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरुलाई प्राथमिकताको आधारमा खोप दिने भनियो । तर खै त ? धेरै नेपाली खोप लगाउन नपाएर वैदेशिक रोजगारीबाट हात धुनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन। कतिले पाएर पनि खोप लगाएको प्रमाण नपाउँदा धर्नामा बसेर सरकारलाई गाली गर्ने अवस्थामा पुर्याइएका छन। यही हो गलत व्यवस्थापनको सन्देश। गल्तीबाट पाठ नसिक्दा आखिर चुकाउनु पर्ने जनताले नै हो । खोप उत्पादन गर्न सक्दैनौ तर खोप खरिद गर्न त सक्छौ नि ।
यही खरिद प्रक्रियामा तदारुकता देखाए पुग्छ । अनि अनुदानको खोप ल्याउन पनि थप सक्रियता देखाए हुन्छ । सम्भावित तेस्रो लहरको आक्रमण आउँने दशैको हाराहारीमा हुने चेतावनी सार्वजनिक भइसकेको छ । तर अहिले हरेक दिन संक्रमितको बढ्दो दरलाई हेर्दा आत्तिनु पर्ने अवस्था भने देखिइसक्यो । बढ्दो दरको निय’न्त्रणमा बुद्धि नपुर्याए यस्ले गर्न खति ठूलो नै हुने पक्का छ । न सीमामा निगरानी नत अस्पतालहरुमा तयारी । सरकार नेपाली जनताको आउँने दशैं खल्लो नबनोस् । त्यसैले सबै नेपाली जनता सचेत रहौ र सतर्क बनौ । भीडभाड नगरौं, को’रो नालाई कुनै पनि ठाउँमा अवसर नै नदिऔं । भिडीयो यहाँ लिंकमा छ ।